Izindlu Zezinhlekelele Ze-Airbnb - Indawo yokuhlala izivakashi ezigulayo
Izindlu Zezinhlekelele · Izindawo Zokuhlala Izivakashi Ezigulayo
Bungaza abantu abadinga ukunakekelwa okubucayi nokunakekelwa ngokwempilo
Nikeza mahhala, indawo yokuhlala kwesikhashana kubantu abadinga indawo abazoyibiza ikhaya.
U-Nancy no-Pearl base-Fisher House
Abantu abaningi kudingeka bahambe ngezizathu zezokwelapha, futhi kaningi izindleko zokuhlala kwesikhashana zingaba yisithiyo esikhulu sokuthola ukwelashwa okusindisa impilo noma ukuphumula okubucayi ngesikhathi sokuphumula. Ukuba nezindlu zesikhathi esifushane zamahhala kungasiza ekunciphiseni ukukhathazeka ngezimali esigulini, ngenkathi kubanika ithemba namandla okunqoba ukugula.
Yilapho umphakathi weZindlu Zezinhlekelele ungena khona. Ababungazi bangahlinzeka ngendawo yamahhala nendawo evumela abantu bazikhothe amanxeba.
Ikhaya lakho linganikeza othile ukuthula-kwengqondo akudingayo ukuze asinde.
Siyabonga kakhulu! Sahleka, sadansa, sapheka, savakasha futhi sahlala. Sekuyisikhathi eside sagcina ukuphila.
Indlela ozobungaza ngayo
IZINDAWO ZOKUHLALA LAPHO ULASHWA
Abalingani Bezindlu Zezinhlekelele bezinhlangano ezingenzi nzuzo enjenge-Fisher House Foundation ne-Hospitality Homes zisiza ukusondelanisa iziguli nezikhungo zokwelashwa. Phakathi nalokhu kuhlala, indima yakho ukunikezela ngendawo yokuhlala ethokomele kuyilapho bona noma othandiweyo wabo ethola ukwelashwa esibhedlela esiseduze.
Iziguli zizokhashwa umndeni noma umnakekeli wazo. Bazoba nanomqondisi ozinikezele ongenzi nzuzo ozobaseka phakathi nokuhlala kwabo. Bavame ukuhlala isonto elingu-1 kuya kwangu-2.
UKUHLALA KWABANTU ABAHAMBA NGOKUPHUMULA
Izindlu Zezinhlekelele zisebenzisana nezikhungo ezingenzi inzuzo ezifana ne-Make-A-Wish ukuhlinzeka izindlu ezinganeni ezigula kakhulu kanye nemindeni yazo enikezwa iholidi lokuphumula. Lolu hambo lungaba nethonya elijulile ekusindeni kwabo. Indima yakho kuyoba ukunikela ngendawo enokwamukela ukuze umndeni uqede ukukhathazeka futhi uqinise ubudlelwano.
Bazoba nanomqondisi ozinikezele ongenzi nzuzo ozobaseka phakathi nokuhlala kwabo. lokhu kuhlala kuvame ukuba izinsuku ezingu-5 kuya kwezingu-10.
Umxhumanisi ovela Ezindlini Zokungenisa Izihambi wayethandeka nxazonke. Walungiselela umndeni wabantu abane ukuba uhlale endaweni yethu ubusuku obubodwa. Wayenobungane futhi kulula ukuxhumana naye. Wanginika yonke imniningwane engangiyidinga ngomndeni futhi wabatshela ngemithetho yendlu yethu, njll. Umndeni wawuthandeka futhi. Kwakuyisipiliyoni esihle nxazonke.
Uzocelwa imininingwane eyisisekelo efana negama lakho eligcwele, isithombe sephrofayili, nekheli le-imeyili. Ungaphinde wabelane nabanye futhi ukuthi yini ekukhuthazile ukuba ubungaze.
Sitshele ukuthi indawo yakho itholakala kuphi, bangaki abantu abangakwazi ukuhlala kuyo, futhi itholakala nini. Uma usuvele ungumbungazi, ungakhetha indlu esikhona kakade.
Ngisebenzela isikhungo esingenzi-nzuzo esihlinzeka ukwesekwa nezinsiza kubantu abafuna ukwelashwa kwenkinga yezokwelapha.
Izivakashi zizokuthumelela umyalezo uma zicabanga ukuthi indawo yakho ifanelekile, noma ungathintwa inhlangano engenzi nzuzo eyenza ukubhukha egameni lamakhasimende ayo. Ungabuza imibuzo, uvume uhlelo, futhi ubeke okulindele mayelana nokuhlala ngaphambi kokuthi yonke into ibe semthethweni.
Iqembu lethu lilapha ukukusekela uma unemibuzo ngenkathi ulungela ukuhlala kwesivakashi sakho. Sizokunikeza izinsiza nezimpendulo zembuzo evame ukubuzwa. Ungaxhumana nezinhlangano ezingenzi nzuzo noma isivakashi uma unemibuzo mayelana nokuhlala okuzayo. Ngokuvamile iziguli zizobe ziphekezelwa imndeni yazo noma umnakekeli, futhi sizoba nomxhumanisi ongenzi nzuzo ozinikezele ozinikeza ukusekelwa phakathi nokuhlala kwazo.
Uhlelo lwe-Airbnb Lwezindlu Zezinhlekelele luye lwasiza Izindlu Zokungenisa izihambi ukuthi zisize izivakashi eziningi - labo abavame ukugcina besohlwini lwethu lokulinda - ngokunikeza izindawo zamahhala zokuhlala ze-Airbnb kuze kube amasonto amabili ngesikhathi lapho izinsiza zomndeni - engqondweni, emzimbeni, ngokwezimali-ziphelile.
U-Mqondisi Omkhulu, Izindlu Zokungenisa Izihambi